Ho an’ity herinandro (26 novambra hatramin’ny 2 desambra) ity, ho avy ny orana eto Antananarivo, manomboka rahampitso. Rivotra mafana ary tsy marin-toerana no mandrafitra ny toetry ny andro mandritra ity herinandro ity. Maina ny andro ny amin’ny ilany atsinanana ao anatin’ny roa na telo andro ho avy. Hanorana mety arahin-kotroka ny faritra sisa. Ho maina kosa ny faritra atsimo, ny faran’ny herinandro. Raha ny mari-pana indray, hisy fidinany ny maripana ambony amin’ny roa ampahatelon’ny avaratry ny nosy.
Ny mari-pana ambany dia eo anelanelan’ny 16 ka hatramin’ny 26°C ary ny mari-pana ambony ao anatin’ny 27 ka hatramin’ny 37°C.
Notanterahina ny talata teo, tao Ambositra, ny atrikasa mahakasika ny tetikasa Fafy ho an’ny distrika. Nahatratra 124 ireo mpizaika ka nahitana ireo ben’ny Tanàna rehetra, ny lehiben’ny mpitsabo eny amin’ny CSB ary ireo fikambanana miantsehatra eny anivon’ny kaominina sy fokontany.
Raha tsiahivina, mitana ny laharana fahaefatra maneran-tany amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka i Madagasikara (ENS OMD:47,3 %) ary misy fiantraikany mivantana amin’ny fianakaviana sy ny fiarahamonina, eny fa hatramin’ny fampandrosoana ny firenena izany.
Anisan’ireo faritra misitraka izao tetikasa izao ny faritra Amoron’i Mania ka ny kaominina rehetra miisa 61 no hiasana mandritra ny dimy taona voalohany.